Terminology Typography: Site na Apex ruo Swash na Gadzook dị n'etiti ... Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Fonts | Martech Zone
Wenezdee, Machị 16, 2022 Wenezdee, Machị 16, 2022 Douglas Karr
Isi ihe na-amasị m na-etolite, mgbe m na-enweghị nsogbu, na-ese ihe. M ọbụna were afọ ole na ole nke idepụta ihe ọmụmụ mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma hụ ya n'anya. Ọ nwere ike ịkọwa ihe kpatara na m na-enwekarị akụkọ ma ọ bụ posts na eserese, Onye na-ese ihe, ihe atụ, na isiokwu ndị ọzọ. Taa, ọ bụ typography na imewe nke mkpụrụedemede.
Ụdị akwụkwọ na akwụkwọ ozi
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iweghachi azụ azụ na akụkọ ihe mere eme nke mkpụrụedemede na akwụkwọ edemede, nke a bụ obere ihe nkiri na nka furu efu nke akwụkwọ ozi.
Psychology nke Fonts
Mgbe ọtụtụ iri afọ nke na-arụ ọrụ na ma ebipụta na online, m kwere na m nwere ezigbo anya maka oké imewe na fon na-arụ ọrụ dị ịrịba ama na ngosi nke a ika, evoking mmetụta uche nzaghachi. N'ezie…
Ọ bụghị naanị na ọdịdị nke ederede bụ ihe dị mkpa maka ụdị akara, ma ọdịdị nke mkpụrụedemede dị iche iche nwekwara ike inwe mmetụta uche na onye na-ekiri ya. Site n'ịgbanwe ụdị nke font, ịhọrọ mkpụrụedemede mmetụta mmetụta karịa ma ọ bụ mkpụrụedemede dị ike, onye mmebe nwere ike ime ka onye na-ekiri ya nwee mmetụta ma zaghachi n'ụzọ dị iche na ika.
Ị ka nwere obi abụọ maka ike nke mkpụrụedemede? E nwere ọbụna ihe pụrụ iche video na-enye akụkọ ihe mere eme nke ụdị mkpụrụedemede na agha dị na YouTube. Ma, n'ezie, jide n'aka na ị ga-elele ihe nkiri Helvetica (na iTunes na Amazon):
Ụdị mkpụrụedemede na nhazi ederede
Enwere nkọwa zuru oke na arụrụ ọrụ arụpụtara na nhazi nke mkpụrụedemede site na Ndị na-ede akwụkwọ. Nke a bụ obere vidiyo dị mma na typography… ọtụtụ ndị amaghị ọrụ niile na-aga n'ime imepụta font yana otu ọrụ mkpụrụedemede nwere ike isi rụọ na ozi gị.
Otu ihe edetu: Nke a bụ nnukwu vidiyo maka ịkọwa njirimara niile nke font, mana enweghị m ezigbo mkpụrụ edemede ha na-eji na vidiyo. Chọrọ ịkọrọ gị ya! N'ụzọ dị otú a mgbe ịchọrọ ịkọwara onye mepụtara gị na ịchọrọ karịa oghere dị n'etiti mkpụrụedemede, ị nwere ike ịsụ asụsụ ha wee sị, "Anyị enwere ike ịnwale ịbawanye ụba."
Ihe odide na-adọrọ mmasị m. Nkà nke ndị na-esepụta ụdị mkpụrụedemede pụrụ iche ma nwekwaa ike igosipụta mmụọ bụ ihe enweghị atụ. Ma gịnị mejupụtara leta? Diane Kelly Nuguid chịkọta ozi a iji nye nghọta n'akụkụ dị iche iche nke akwụkwọ ozi na ederede:
Typography Terminology Nkọwa okwu
Ma e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na nka nke odide. Nke a bụ akụkụ ọ bụla na njirimara nke emebere n'ime mkpụrụedemede site na Ndị na-ede akwụkwọ.
Aperture - Oghere ma ọ bụ oghere ezoro ezo mechiri emechi nke mepụtara site na tebụl mepere emepe.
Akara - Isi okwu jikọtara ọnụ nke mkpụrụedemede leta ebe ọnụọgụ abụọ na-ezukọ; nwere ike mechie, dị nkọ / pịrị ọnụ, ewepụghị / masịrị, wdg.
Arc nke azuokokoosisi - Ọkpụkpụ curved na-aga n'ihu na azuokokoosisi.
Crigo - Otu akụkụ nke font nke na-arịgo elu karịa agwa.
ogwe aka - A kehoraizin ọrịa strok nke na-adịghị jikọọ a azuokokoosisi na otu ma ọ bụ abụọ nsọtụ.
Bar - Ihe a na-ahụ anya na mkpụrụedemede A, H, R, e, na f.
Baseline - Kehoraizin itinye n'ọnọdụ nke isi nke akwụkwọ ozi.
Bowl - Ọkpụkpụ curved nke mepụtara tebulu.
counter - The ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu nchọ ohere n'ime a agwa.
Oku Cross - A akara nke gbatịrị gafee / site azuokokoosisi nke a leta.
Agbada - Akụkụ nke agwa mgbe ụfọdụ na-agbadata n'okpuru usoro, ọkachasị na ag, j, p, q, y na oge ụfọdụ j.
ntị - The obere ọrịa strok na oru ngo si n'elu a lowercase g.
ụkwụ - Akụkụ nke azuokokoosisi nke dabere na ntọala.
Gadzook - Ihe ịchọ mma nke jikọtara mkpụrụedemede abụọ na Ligature.
Joint - Isi ebe ọrịa strok na-ejikọ na azuokokoosisi.
Ilekọta anya - Oghere dị n’etiti mkpụrụ akwụkwọ n’okwu.
-eduga - Oghere dị n’agbata usoro ntọala otu akara ederede na nke ọzọ.
Ụkwụ - Ọrịa dị mkpụmkpụ, na-agbadata na mpempe akwụkwọ ozi.
Nkọwapụta - Akwụkwọ ozi abụọ ma ọ bụ karịa jikọtara iji mepụta otu agwa; ọ bụ ihe ịchọ mma.
Ogologo ahịrị - Etu odide ole dabara na ahịrị tupu ị laghachi na mmalite.
Mbanye - Akụkụ obere nke obere g.
Serif - Atụmatụ ndị a na-agbatị bụ isi nke agwa. Sans serif pụtara n'ụzọ nkịtị 'na-enweghị' Serif. A maara mkpụrụ edemede sitere na Serif iji nyere ndị mmadụ aka ịgụ ngwa ngwa ebe ọ bụ na akọwapụtara ụdị okwu ahụ nke ọma.
ubu - Ọkpụkpụ akụkụ nke h, m na n.
Igwu mmiri - Mgbatị mara mma ma ọ bụ ọrịa strok na nhazi akwụkwọ ozi.
azuokokoosisi - Isi ihe kwụ ọtọ, kwụ ọtọ na leta (ma ọ bụ diagonal mgbe enweghị vetikal).
strok - A ogologo ma ọ bụ curved akara nke na-eme ka Ogwe, ogwe aka, ị ga na ọkwá.
ọnụ - Ọgwụgwụ nke ọrịa strok ọ bụla nke na-agụnyeghị serif; na-agụnye bọọlụ (okirikiri n'ụdị) na finials (curved ma ọ bụ tapered na udi).
Vertex - Isi na ala nke agwa ebe ụtarị abụọ zutere.
x-elu - Ogo nke ụdị onye a na-ahụkarị (ewepu onye ọ bụla na-arịgo ma ọ bụ rịdata)
Janie Kliever nyere nke abụọ infographic nke Canva na ụfọdụ ndị ọzọ zuru ezu. Pịa na ya ka ị gaa n’otu isiokwu ha maka nghọta miri emi banyere nke ọ bụla.
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m maka Canva ke ibuotikọ emi.
Tags: ngweapexaak azuokokoosisiogwe akarigobọọlụ ọnụmmanyaakwukwo ndunnukwu efereokpukpucounterobenwaDiane Kelly Nuguidntịemefont akụkụederedeụkwụgadzokJanie Klievernkwonkwokerningeduụkwụogologo akaraakaakụkụ nke a fontenweghị serifserifubuazuokokoosisiọrịa strokswashỌnụngwa ngwaederedetypography okwunkowatypography teminolojiokwux-elu
Kedu ihe kpatara nhicha data ji dị oke egwu yana otu ị nwere ike isi mejuputa usoro ịdị ọcha data yana ngwọta